Abdullahi CC: Waxaa la joogaa xiligii lasoo rogi lahaa xeerka ka hortagga muslim naceybka. - NorSom News
Waxay arrin naxdin leh ka dhacday masaajid ku yaal magaalada Bærum oo u dhaw magaalada Oslo, taariikhdu markii ay eheyd 10.08.19. Waxaa masjidka weeraray nin cunsuri ah oo doonayay inuu dil iyo dhibaato ka geysto masjidka.
Ninkaan wuxuu daqiiqado ka hor soo dilay gabar yar oo walaashiis ah. Laakiin nasiib wanaag uma suurta galin dhibaatadii uu la doonayay masjidka. Waxaa Allah SWT sabab uga dhigay inay joojiyaan dadkii masjidka ku cibaadeysanayay, gaar ahaan nin waayeel ah oo muslimiinta masjidka joogtay kamid ahaa.
Arintaan waxey ku soo aaday maalin uun ka hor maalinta ciida Carafo. Arrintaan waxay wel-wel iyo walaac ku abuurtay dhamaan muslimiinta Norway. Guud ahaan Norway waxaa kajira muslim nacayb aad ubaahay inkasta oo dadka noorweyjigaa muujiyeen taageero badan oo ay muslimiinta u hayaan hadana waxaa jira dhib wadayaal badan oo muslimiinta dhib la damacsan.
Arrintaan waxaa looga hortegi karaa oo kaliya in la dejiyo xeerka ka hortaga muslim nacaybka illaa sharcigaas la dejiyo dhibaatadu waa sii socon doontaa.
Waxaan maqaal aan muhiimada xeerkan kusoo daabacay wargeyska Bergens Tidende Halkan kasii akhri:
BT: Tid for handlings plan mot islamo fobi
Previous articleRa´yi uruurin la sameeyay oo natiijo hoose siisay Venstre iyo Frp.
Next articleUN-ka oo Norway ku eedeeyay adkeynta dib u midowga qoysaska.